China YF-H-907 akpụkpọ anụ ndụ ụlọ na-emepụta Manufacturer na Supplier | Yifan
YF-H-907 akpụkpọ anụ ụlọ obibi
Linekpụrụ akara geometric na-ezukọ na tebụl dị mma, na-eme ka ọ dị mma maka ezinụlọ nke oge a.
Isiokwu oge 1800mmL * 400mmW * 420mmH +
Na-egosipụta nnukwu drọwa anọ maka ịchekwa na ịhazi nzukọ, DVD, egwuregwu vidio, nkeji ime obodo, na ndị ọzọ.
The dum set gụnyere TV Guzosie, n'akụkụ table, kọfị table, nri nkuru n'onwe Cabinet
Osisi Mango na Marble Dark Oval Sideboard na TV Stand bụ ihe ngosi na-akwụsị nkwụsị nke ga-agbanye ọmarịcha na ọkaibe n'ime atụmatụ gị ozugbo. A Nchekwa Cabinet na a magburu onwe mabul top, a mara abụba enye ngwa na-enye ọtụtụ ohere iji gosipụta ọkacha mmasị gị ịchọ mma na ya n'elu ala ebe ịchekwa ihe pụọ, na-eke ihe effortless maa mma anya nke bụ ma obi ike na-atọ ụtọ.
Mee ka ebe obibi gị na-acha ọcha dị ọcha. Na ọtụtụ ohere nchekwa, enwere eserese atọ nke dị mma maka ịhazi ihe ndị dị mkpa na kọbọd ụzọ abụọ sara mbara nke na-emepe iji kpughee usoro nke shelf ime maka ihe ndị ka ibu. Ọ na atụmatụ ike ị thatụ ndị na-na-na-na minimalist imewe na-enye ngwa ngwa na mfe nnweta gị echekwara ọdịnaya.
Dị na ọcha na Black, bulie ya!
YLỌ: Okomoko & Ọmarịcha Ọdịdị na ọgbara ọhụrụ, ọdịdị ọcha dị oke ọnụ na ọmarịcha ọmarịcha ọgbara ọhụrụ.
IHE: ihe: etiti: igwe anaghị agba nchara electroplated ọlaedo na agba, n'elu: MDF, enyo iko ọlaedo acha, nnyefe: kụrụ aka down.High mma laminated osisi (eguzogide mmebi na ọkọ, mmiri mmiri na elu okpomọkụ) Ezigbo elu gloss ọcha ọcha nwere a eke nwuo nke gosipụtara ọkụ mara mma.
A ga-enyefe kabinet ahụ n'ụzọ zuru ezu, na-enyere gị aka inweta ya n 'ụlọ ị họọrọ. A choro ichikota onwe. Dị ka nke a bụ ihe buru ibu anyị ga-akwado mmadụ abụọ maka usoro mgbakọ. Mgbakọ ekwesịghị iwe oge dị ukwuu iji nwee ike ịgbaso usoro ntụpụ ụkwụ site na iji usoro dịnụ.
Nke gara aga: YF-H-906 Smart Now Coffee Isiokwu + TV guzoro na Rotatable Drawers na White & akpu
Osote: YF-2001 Wepụ-Tebụl Kọfị Nke Na-eju Gị Anya n'Thezọ Kasị Mma Ga-ekwe Omume
YF-2001 Eweli-Top Kọfị Tebụl Nke juru Gị Yo ...